Vatsim-panahy Jolay 2019 - FJKM Amparibe Famonjena
FJKM Amparibe Famonjena
Mahatoky izao teny izao
Jolay 2019 Vatsimpanahy
Perikopa : Ezek.36 : 22-30 ; Mat.12 : 31-37 ; 1Tes.1 : 1-10
Te hifaninana mafy amin’i Jesoa ireo Fariseo amin’ny fanaovana ny asan’Andriamanitra. Sintoniny ny vahoaka hanaraka azy, ka handao an’i Jesoa sy ny fampianarany ary ny asa vitany. Eto amin’ny perikopa, dia nisy nitondra teo amin’i Jesoa ny lehilahy iray demoniaka, sady jamba no moana ; nositraniny, ka dia niteny sy nahita. Talanjona ny vahoaka, ka toa niandrandra an’i Jesoa ho ny Kristy na Mesia, avy amin’ny taranak’i Davida. Ny Fariseo kosa raha nahare izany dia nanambara hoe : « Tsy misy amoahan’Ilehiny ny demonia afa-tsy i Belzeboba lohan’ny demonia ».
Nahitsin’ny Tompo izany fiheverana izany tamin’ny nanambarany ireo zavatra roa loha tsy ahazoam-pamelan-keloka ; dia ny :
– Miteny ratsy ny Fanahy Masina ;
– Miteny hanohitra ny Fanahy Masina.
Miteny ratsy ny Fanahy Masina
Fahotana ratsy indrindra tsy ahahazoana famelan-keloka ny miteny ratsy ny Fanahy Masina. Ny hevitry ny hoe: “miteny ratsy” dia toy izao: manao izay haharatsy; avadika ho ratsy ny tsara; atao izay haharatsy izay nataony mba tsy hisy handray ny tsara vitany.
Eto raha tsara sy mahasoa ny asa vitan’ny Tompo – nahasitrana ny demoniaka jamba sady moana – dia noharatsiana izany. Velom-pialonana mafy ny Fariseo satria tsy nahavita izany. Ny vahoaka kosa tetsy andaniny nitolagaga sady talanjona nahita ny fahasitranana teo no eo. Niteny ratsy ny asa vitan’ny Tompo, no fara herin’ny Fariseo. Tsy ny Tompo ihany anefa no nanavaony izany, fa indrindra ny Fanahy Masina; izay namoahan’i Jesoa ny demonia. Io no fitenenan-dratsy (blasfemia) ny Fanahy Masina. Izany no atao hoe manaratsy ny asa ho amin’ny farany ratsy indrindra mba hahatsatso, tsy hinoan’ny olona an’i Jesoa. Tsarovy, fa ny Fariseo dia olona mpivavaka manana ny teny fikasana ny amin’ny Mesia zanak’i Davida. Saingy noho ny fialonana izay tonga fankahalana an’i Jesoa sy ny asany no itenenany ratsy toy izao.
Miteny ratsy ny Fanahy Masina, satria tsy te handray ny asan’io Fanahy
Masina io hanavao azy, hiaiky ny Fanahy Masina. Ny olona toy izany no tsy mety ho tonga amin’ny fiaiken-keloka, ka hibebaka amin’ny ratsy vita ary hino an’i Jesoa. Izany no tsy ahazoany famelan-keloka, satria donto ny fony, maizina ny sainy, mankahala ny fanahiny. Tsy mety mihaino intsony ny bitsiky ny Fanahy Masina izy. Ny Jiosy tamin’ny andron’i Ezekiela, raha nanamafy ny fony tsy nanaiky handray fanadiovana ny fanahiny, dia mbola nitohy hatrany ny fijaliany tany amin’ny fahababoana, tany Babylona. Rehefa nanaiky hohavaozin’ny Fanahin’Andriamanitra kosa izy, dia afaka amin’ny fahababoana sy hiverina amin’ny taniny ary tsy ho fandatsan’ny jentilisa intsony (Ezek.36/22-30)
– Aoka hitandrina tsara isika vahoakan’Andriamanitra. Eto tokoa dia ny mahalala ihany no miteny ratsy ny Fanahy Masina. Na mamela heloka isan’andro aza ny Tompo; ny miteny ratsy ny Fanahy Masina, tsy hahazo izany akory…
– Tandremo amin’ny asan’ny Tompo atao sao misy fireharehana ka ny asan’ny Fanahy Masina mampitolagaga ny olona no sandohana ho anao. Takonanao tsy hisy hahalala ny asan’ny Fanahy Masina, ka lasanao ny fo sy saina ary ny fanahin’ny olona. Isan’ny blasfemia izany, satria ny asan’ny Fanahy Masina no sandohanao ho asanao
– Fantaro tsara ny asan’ny Fanahy Masina, sao dia mifangaro amin’ny asan’ny fanahy hafa. Mety hahavoafitaka anao.
Miteny hanohitra ny Fanahy Masina
Raha misy fahotana mahafaty dia isan’izany ity, satria io no antsoina hoe: ota mandrakizay. Toa mitovy amin’ilay nambara teo ambony nefa tsy tena sahala. Ny hevitry ny hoe: “miteny hanohitra” dia: miady mba tsy ho resy; mandà tsy hanaraka mihitsy; misakana araka izay azo atao, mitsipaka tanteraka, manilika fatratra, manosi-bohon-tanana. Hita ao anatin’ireo dikan-teny ireo ireto hevitra ireto: manimbazimba, manevateva, manesoeso, manao vava ratsy, manao izay mahatezitra, manilikilika, maniratsira. Raha izany hevitra voalaza izany no atao amin’ny Fanahy Masina, dia tsy hahazo famelan-keloka intsony tokoa, na eto amin’ity fiainana an-tany na amin’ny fiainana ho avy (aorian’ny Fitsaran’i Kristy izany). Ny olona sahy miteny hanohitra ny Fanahy Masina, dia olona efa mijoro ho fahavalon’ny Fanahy Masina. Noho izany, tsy azon’ny Fanahy Masina iasana intsony ka ho tonga amin’ny fibebahana sy ny finoana an’i Jesoa ho Mpamonjy azy. Ny asan’ny Fanahy Masina dia mampahafantatra ny olona ny zavatra rehetra, mampiaiky ny fahotana, milaza ny zavatra ho avy… Izay tsy mandray ny Fanahy Masina sy tsy mety hohavaoziny ary tsy manaiky hotantanany dia tsy hahay hiaiky ny helony mba hibebaka. Tsy hino fa Jesoa no Tompony sy Andriamaniny. Fa inona moa no mahafaly an’i Paoly sy Silasy ary Timoty, ka nampisaotra azy ireo an’Andriamanitra ny amin’ny Tesaloniana? (perikopa). Nanaiky ny asan’ny Fanahy Masina izy ireo. Nandray ny Filazantsaran’ny famonjena ao amin’i Kristy Jesoa, ka tonga mpiara- miombona ho tena iray ao amin’ny Tompo. Henony ny Filazantsara, tahaka ny anjomara mameno mafy ka tonga ren’ny olona rehetra koa ny antson’ny Vaovao Mahafaly (1Tes.1/1-10) – Manentana antsika, ry Fiangonana, hanaiky iasan’ny Fanahy Masina toy ireo tany Tesalonika mba ho fiasana mahomby ivelaran’ny ambaindain’ny fanjakan’ Andriamanitra. Mandehàna mandray ny fiofanana ataon’ny SEMI sy ny sehatra maro misy eto amin’ny sahan’ny F.J..M. Manolora tena hanao tafika masina, na izay omanin’ny Fiangonana eto amintsika, na ny sampana, na ny Synodamparitany sy ny Foibe. Mila katekista roa isika izao, ho any Ambohitompoina sy Bevoay. Iza no hanolo-tena? – Mampirisika antsika handroso hatrany amin’ny lalina kokoa hampiasa ny talenta sy ny fanomezam-pahasoavana avy amin’ny Tompo hanabeazam-boa ny Tenin’ Andriamanitra any amin’ny ankohonana, fianakaviana, fiarahamonina rehetra; eny hatrany amin’ny faran’ny tany. – Mampahery antsika hanavao isan’andro ny fanoloran-tena ho an’ny Tompo mba tsy ny devoly no hanao ankisisika ao amintsika hanilika ny asan’ny Fanahy Masina ka ho diso lalana, hangatsiam-po, na ho lasa mafy fo mihitsy. Tsy manaiky handray ny asan’ny Fanahy Masina, ary mety hiafara amin’ny fanaovana teny hanohitra ny Fanahy Masina sy hiteny ratsy Azy aza. Saintsaino tsara fa izany no manjo ny olona tsy ampy fanoloran-tena ho an’ny Tompo.
Meteza hofenoina ny Fanahy Masina, ry Amparibe Famonjena, mba ho tonga olom-baovao mandrakariva ao amin’ny Tompo, ka hifady ny fitenenan-dratsy ny Fanahy Masina sy ny fanaovana teny hanohitra Azy. Isika rehetra anie samy ho tonga amin’ny fibebahana hatrany sady ho mafy orina amin’ny finoana ny Tompo Jesoa. Ho an’Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amena